महिला उत्पीडन र संगठित प्रतिरोधको प्रश्न- विचार - कान्तिपुर समाचार
वर्गीय रूपमा शोषित र उत्पीडित तल्लो वर्गलाई जोड्दै बहुसंख्यकको एजेन्डासहित वर्गसंघर्षलाई केन्द्रमा राखेर गरिने संघर्षले नै विजयसम्म डोर्‍याउँछ ।
वैशाख ३०, २०७९ अनिता पण्डित
हालै सामाजिक सञ्जालमा मैले मिथिला चित्रकलाको झल्को दिने एउटा डिजिटल पोस्टर देखें, जसमा हिन्दीमा लेखिएको थियो— ‘काम से लौटकर स्त्री काम पर लौटती है ।’ त्यो डिजिटल पोस्टर र त्यसमा लेखिएको पंक्तिले आजका महिलाको स्थितिको सटीक चित्रण गरेको छ ।
आज महिलाहरू श्रमको क्षेत्रमा दोहोरो–तेहरो शोषण र सामाजिक हिसाबले अनेक तहगत उत्पीडनको सिकार भएका छन् । यही शोषण र उत्पीडनको भुमरीमा फसेर रुमलिरहेका, त्यसबाट उम्कन हातपाउ चलाउन थालेका, जागरुक हुन कोसिस गरिरहेका महिलाहरूले बढीभन्दा बढी र नयाँभन्दा नयाँ सृजनशील उपायहरूमार्फत स्थापित गर्नुपर्ने कुरा हो— पुँजीवादी समाजमा महिलामाथि भइरहेको दोहोरो दलनको यथार्थ !
मानव इतिहासमा अतिरिक्त उत्पादन सम्भव भएसँगै सुरु भएको निजी सम्पत्ति राख्ने चलनदेखि महिलाको उत्पीडनले जग हालेको हो । इतिहास आफ्ना स्वरूपहरू बदल्दै आजको भूमण्डलीय पुँजीवादसम्म आइपुगेको छ । यति लामो कालखण्डमा महिला उत्पीडनका स्वरूपहरूमा केही भिन्नता आए पनि एकातिर उत्पीडनलाई राज्यतहबाट सशक्त रूपमा सजिलै भेद नखुल्ने गरी संस्थागत गर्ने तर अर्कातर्फ यसविरुद्ध लड्न तयार हुनेहरू उत्पीडनका वास्तविक कारणहरूमा ठोस रूपमा प्रवेश गर्नुभन्दा सतही व्याख्या र पौंठेजोरीमा भुल्ने गरिरहेका छन् । यही कारण आन्दोलन छैन र उत्पीडनविरुद्धका प्रयासहरू पनि दिशाहीन र विभाजित छन् ।
पुँजीवादी उत्पादन प्रक्रियामा महिलाको श्रम शोषण दुई प्रकारले हुन्छ । पहिलो, पुँजीवादले महिलालाई नाफा र सस्तो श्रमका लागि बजारमा ल्यायो । यो कदम महिला स्वतन्त्रताको दिशामा गुणात्मक काम भए पनि यसको मुख्य ध्येय महिला स्वतन्त्रताको सवाल नभएर पुँजीपतिका लागि सस्तो श्रम र अधिक नाफाको विषय थियो । भूमण्डलीय पुँजी बजारमा ठूला कारखानाको एसेम्ब्ली लाइनमा काम गर्ने र अविकसित भनिने अनेकौं देशका कुनाकुनासम्म फैलिएको असंगठित–अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका तमाम गरिब महिलालाई पनि प्रत्यक्ष शोषण गरेर पुँजीपतिहरूले नाफा कुम्ल्याइरहेका छन् ।
मजदुर पुरुषकी श्रीमतीका रूपमा घरमा बसेर घरकै मात्र काम गर्ने महिलाहरूमाथि पनि यो पुँजीवादी व्यवस्थाले पुनरुत्पादन प्रक्रियामार्फत उत्पीडन जारी राखेको छ, एकल परिवारलाई जीवित र सक्रिय राख्दै त्यसमा उत्पीडनको आयामलाई कार्यान्वयन गरिरहने वातावरण तयार गरेको छ । अब ती महिलाहरूको श्रम शोषण कसरी हुन्छ भनेर हेरौं । मजदुर पुरुषको घरमा रहेकी महिलाले खाना बनाउने, बच्चा जन्माउने र तिनको लालनपालन गर्ने, सरसफाइ गर्ने, प्रत्येक साँझ कामबाट फर्केको मजदुर श्रीमान्लाई भोलिपल्ट पुनः काममा फर्कनलायक बनाउने, पुनरुत्पादनको प्रक्रियामा संलग्न रहेर मजदुरको अर्को पुस्ता जन्माउने र पुँजीपतिको कामका लागि तयार गर्ने गर्छिन् । घरका तमाम काम सित्तैंमा गरिदिन्छिन् । यो सवालमा मार्क्स र एंगेल्सले महिलाको प्राकृतिक रूपमा पुनरुत्पादनको कामले कसरी पुँजीवादी शोषण र उत्पीडनका आयामलाई धानिरहेको छ भन्ने व्याख्या गरेका छन् । पुँजीवादी माल उत्पादनका क्षेत्रमा मूल्य तब मात्र पैदा हुन्छ, जब सामाजिक रूपमा आवश्यक श्रमशक्ति त्यहाँ लाग्छ । श्रमिकले श्रमशक्ति बेचेमार्फत ज्याला पाउँछ । त्यो ज्याला मुख्यतः श्रमिकलाई खानपिन, लत्ताकपडा, बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनका लागि चाहिने खर्च लगभग थेग्ने गरी र एक श्रमिक जेनतेन जीवन धान्दै पुनरुत्पादनको प्रक्रियामार्फत बच्चा जन्माउन योग्य हुने गरी तय हुन्छ । हाम्रोजस्तो समाजमा अझै मजदुर वर्गको ‘बार्गेनिङ पावर’ नभएकाले ज्याला सहज रूपमा जीवन धान्ने खालको पनि ज्याला हुँदैन । यसैमा एकल परिवारमा महिलाको भूमिकाको कुरा आउँछ । महिलाले मजदुर श्रीमान्सँग बसेर घरका दैनिक कामहरू बिनाज्याला गरिदिन्छिन् । त्यसो गर्दा पुँजीपतिले श्रमिकमा गर्ने लगानीलाई कम गरे पनि मजुदरको अर्को पुस्ताको पुनरुत्पादनमा रोकावट हुँदैन । पुँजीपतिहरूले जतिसक्दो कम ज्यालामा मजदुरबाट काम लिन सक्ने वातावरण तयार हुन्छ । पुँजीपतिलाई अधिक नाफा लिने छुट हुन्छ ।
यसका लागि दोषी को हो ? के अब घरमा काम गर्ने महिलालाई पुरुष मजदुर या राज्यले ज्याला दिने भन्ने निष्कर्षमा जाने हो त ? पक्कै पनि होइन, पुरुष मजदुरमा महिलालाई ज्याला दिने सामर्थ्य नै हुँदैन । राज्यले दिने हो भने पनि आम जनताबाट लिएकै अप्रत्यक्ष करबाट दिने हो । त्यसो गर्दा त्यसको भार स्वयं गरिब मजदुर, किसानमै पर्न आउँछ । त्यसो भए ज्याला दिनुपर्ने कसले हो ? मजदुरले काम गरेबापत परिवारसमेतको जिम्मेवारीलाई हेर्दै पुँजीपतिले ज्याला निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर पुँजीपतिकै रक्षा र प्रवर्द्धन कमिटीको यही व्यवस्थाले पुँजीपतिको नाफा अलिकति पनि कम हुन दिँदैन बरु राज्य संरचनामार्फत नै यस्ता एकल परिवारलाई बचाउने र उत्पीडनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ ।
पुँजीवादनिर्मित संरचनाले महिलाको वस्तुकरण बढाएको छ । पोर्न बेच्ने, महिला शरीरलाई विज्ञापन, ब्युटी क्विन कन्टेस्ट र शो पिसका रूपमा खडा गरेर जेजसरी भए पनि पैसा कमाउने साधनका रूपमा पेस गर्ने गरेको छ । यसले भद्दा गीत, संगीत, फिल्म र साहित्यमार्फत महिलालाई केवल बेचिने वस्तु, सुन्दर मालका रूपमा प्रस्तुत गरेर उत्पीडनलाई नै अझ प्रभावकारी बनाउने काम गरिरहेको छ । तर महिलाको वस्तुकरण गरिएकामा, स्त्रीद्वेषी चेतना फैलाएकामा यो राज्यव्यवस्थाले परबाह गर्दैन । उसको एक मात्र सरोकार बेच्नु र नाफा कमाउनुसँग छ । बेलामौकामा सुधार र परिवर्तनको केही प्रयास र पुँजीवादी जनवादी अधिकार र महिला अधिकारको ढोङ गर्दै उत्पीडनका वास्तविक कारणहरूलाई पर्दाले छोपेर बाँचिरहेको पुँजीवादलाई ढाल्ने विचारधारा, नीति, कार्यक्रम र संघर्ष नै पुँजीवादी पितृसत्ताविरुद्धको लडाइँ जित्ने विकल्प हो ।
कसले लड्छ ?
समस्याको पहिचानसँगै भेटिने हो समाधानको बाटो । महिला उत्पीडनको सवालमा को लडिरहेको छ ? लडाइँ कस्तो छ ? कसले, कसरी लड्दा लडाइँ जितिन्छ ? यी प्रश्नहरूमा सदियौंअघि प्रवेश गरिएको भए पनि अझै अस्पष्टता, अव्यावहारिकता र असफलताको चाङ हामीले उत्तिकै देखिरहेका छौं । महिलाहरूले उत्पीडन उत्तिकै भोगिरहेका छन् । यसो किन भैरहेको छ ? लड्ने सवालमा यतिका समय, ऊर्जा र सचेत प्रत्यनहरू हुँदै गर्दा पनि समाज मुख्य शत्रुलाई प्रहार गर्न किन संगठित छैन ?
यी प्रश्नहरूमा आज पुनः प्रवेश गरिरहँदा हामीले अहिलेसम्म विकसित दार्शनिकीहरू र तिनले मानव समुदायको भौतिकी र चेतनाका क्षेत्रमा गरेको परिवर्तन र पारेको प्रभावबारे अध्ययन गर्नु जरुरी छ । पुँजीवादी वैश्विक व्यवस्थाले पितृसत्तालाई मज्जाले आफूमा समाहित गरिसकेको छ । अनि यो पितृसत्तात्मक व्यवस्थालाई संरक्षण र मलजल गर्ने वर्तमान समयको सबैभन्दा वर्चस्वशाली विश्वदृष्टिकोण आदर्शवाद (मेटाफिजिक्स) हो । मेटाफिजिक्सका अनेकौं धाराको वैचारिकीले यो समयमा प्रविधि र सञ्चारका साधनको विकासका कारण विगतमा भन्दा वर्चस्वशाली रूपमा आम मानिसलाई प्रभावित पार्न सफल भएको छ । सोभियतकालीन र चिनियाँ समाजवादीहरूले सत्ता स्थापना गरेसँगै पलाएको आशा समाजवादी सत्ताको प्रयोग र पतनपछि निराशामा परिणत भयो । त्यसपछि विकास भएका वैचारिकीहरूमा मुख्यतः पहिचानको राजनीति र उत्तरआधुनिकतावादले आन्दोलनको सामूहिकतामा लड्ने र जित्ने रूपमा लड्नेभन्दा पनि व्यक्ति/समुदायकेन्द्रित टुक्राहरूमा विभाजित गर्ने चेतनाको विकास गरेर उत्पीडनको सही कडी समातेर आन्दोलित हुन दिइरहेको छैन । बरु नयाँ पुस्ताको जानीबुझी अराजनीतीकरण गरिँदै छ ।
सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा असी हजार महिला रहेको ग्रुपमै मुख्यतः सतही कुरा, टाइम पास गर्ने जोडीका फोटाहरू, कन्फेसन, मेकअपका सामान सम्बन्धी सुझावलाई पहिलो प्राथमिकतामा ग्रहण गरिने र यदाकदा सामान्य राजनीतिक रुझानको सामग्री राख्नासाथ ब्लक गर्नेजस्ता हैरानीपूर्ण कामहरू हुने गरेका छन् । छिनभरको उभार र प्रचारपछि थन्किने अनि मुद्दालाई छाडिदिने प्रवृत्ति पनि छ । क्रान्तिकारी, रूपान्तरणकारी देखिनेहरूमा पनि व्यावहारिक र सांगठनिक जीवनलाई अंगीकार नगर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यस्ता प्रवृत्तिहरू उत्पीडनविरुद्धको संघर्ष कमजोर पार्ने कडी हुन् ।
तत्काल भइरहेका विभेद, हिंसा र उत्पीडनका अनेकौं आयामको सर्जरी आजैदेखि थालिनु जरुरी छ । तर सर्जरी गर्नेहरूको कमीकै कारण निर्मला पन्त हत्याको दोषी भेटिएन । अछाम अदालतमा होस्टाइल हुन बाध्य किशोरी नै बिनाकुनै कानुनी आधार जेलमा थुनिनुपर्ने आदेश आयो । हिंसामा संलग्न र हिंसाका आरोपी व्यक्तिहरूले नै यही कथित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा चुनिने प्रक्रियामा जाने सुविधा पाइरहेका छन् । संविधानमा तोकिएको समावेशी–समानुपातिक हक–अधिकारलाई दलहरूले गठबन्धन र अनेक बहानामा खुल्लमखुला खारेज गरिरहेका छन् । नागरिकताको सवालमा आज पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको मान्यता छ । पैतृक सम्पत्तिको अधिकार व्यवहारमा अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । निजी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला–पुरुषबीच ज्यालामा असमानताबारे कसैको ध्यान गएको छैन । हिंसा र बलात्कारका घटनामा मिलेमतो गर्न प्रेरित गर्ने माहोल बनिरहेको छ ।
परिस्थिति यस्तो छ, तर यसविरुद्ध संगठित प्रतिरोध वा आन्दोलन छैन । भएका थोरै प्रयत्नहरू पनि टुक्राटुक्रामा विभाजित छन् । यो बाँडिएको र भाँडिएको आन्दोलनलाई एउटै मालामा गाँस्ने प्रयत्नहरूको खाँचो भएको सत्यलाई ग्रहण गर्दै पुनः नयाँ ऊर्जासाथ अघि बढ्न जरुरी छ । वर्गीय रूपमा शोषित र उत्पीडित तल्लो वर्गलाई जोड्दै बहुसंख्यकको एजेन्डासहित वर्गसंघर्षलाई केन्द्रमा राखेर गरिने संघर्षले नै विजयसम्म डोर्‍याउँछ ।
पुरुष, परिवार, पितृसत्ता, महिलाको जैविक प्रजनन क्षमताजस्ता केन्द्रमा मात्रै प्रहार गरेर लडाइँ जितिँदैन । शोषण र उत्पीडनको संरचना तयार गर्ने पुँजीवादी व्यवस्था नै हाम्रो मुख्य शत्रु हो । यसलाई ढाल्न नयाँ जागरणसहित सम्पूर्ण गरिखाने वर्ग, उत्पीडित समुदायहरू, महिला, दलित, जनजाति, लैंगिक अल्पसंख्यकले नै सबैभन्दा अगाडि आउनुपर्छ । संगठित प्रतिरोधमार्फत आजका समस्याहरू आजै हल गर्न कोसिस गरेर समग्र व्यवस्था परिवर्तनको लामो लडाइँको तयारीमा लाग्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।
प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७९ ०६:३३
सुवासले जिते टुर च्याम्पियनसिप
सुवासद्वारा भुवन र शुक्रबहादुरमाथि ७ स्ट्रोकको फराकिलो अग्रता लिँदै व्यावसायिक गल्फ प्रतियोगिताकै मुख्य उपाधि कब्जा
काठमाडौँ — एमेच्योर सुवास तामाङले अन्तिम चरणमा ४ अन्डर ६८ खेल्दै गोकर्ण गल्फ क्लबमा बिहीबार सूर्य नेपाल एनपीजीए टुर च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेका छन् । चारदिने प्रतियोगितामा १९ अन्डर २६९ स्कोर गरेका उनले भुवन (उमेश) नगरकोटी र शुक्रबहादुर राईमाथि ७ स्ट्रोकको फराकिलो अग्रता लिँदै व्यायसायिक गल्फ प्रतियोगिताकै मुख्य उपाधि कब्जा गरेका हुन् ।
गोकर्णमै तीन वर्षअघि भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा दुई स्वर्ण जितेका सुवासले भुवनमाथि २ स्ट्रोकको अग्रतासहित अन्तिम चरणको खेल प्रारम्भ गरेका थिए । दोस्रो दिन भुवनसँगै संयुक्त शीर्षस्थानमा रहेका उनले पहिलो दिन ८ अन्डर ६४ को उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सबभन्दा अगाडि पुगेका थिए । उनले दोस्रो चरणमा ४ अन्डर ६८ स्कोर गरे भने तेस्रो दिन ३ अन्डर ६९ खेल्दै निरन्तर शीर्षस्थानमा रहेका थिए ।
सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२१–२२ को सातौं प्रतियोगितामा सुवासले उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई अन्तिम दिन पनि कायमै राख्ने क्रममा सुरुका ९ होल ४ अन्डर ३२ मा राखेका थिए । पार ५ को तेस्रो होल ३ स्ट्रोकमा टुंग्याउँदै इगल गरेका उनले सातौं र नवौं होलमा १–१ सट स्ट्रोक जोगाउँदै बर्डी गरेका थिए । पछिल्ला ९ होलमा भने उस्तै प्रदर्शन गर्न सकेनन् । उनले दसौं र १२ औं होलमा बर्डी गरे पनि होल नं. १४, १५ र १६ मा लगातार १–१ सट बढी खेल्दै बोगी बेहोरेका थिए । १७ औं होल पारमा टुंग्याएका उनले अन्तिम होलमा बर्डी गर्दै उपाधि यात्रालाई पूर्णता दिएका थिए ।
व्यावसायिक गल्फ प्रतियोगितामा एमेच्योर खेलाडीलाई नगद पुरस्कार दिने चलन छैन । तर, सुवासले मुख्य प्रतियोगिता र एमेच्योरको गरी दुई ट्रफी हात पारे । उनले गत चैतमा हिमालयन गल्फ क्लब, पोखरामा सम्पन्न टुरकै प्रतियोगिता ‘वेस्टर्न ओपन’ को उपाधि पनि जितेका थिए ।
एमेच्योरतर्फ सद्भव आचार्य उपविजेता भए । समग्रमा आठौं स्थानमा रहेका उनले १ अन्डर २८७ प्रदर्शन गरे । उनले अन्तिम दुई दिन समान ३ ओभर ७५ खेलेका उनले सुरुका दुई दिन भने उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । उनले पहिलो दिन ४ अन्डर ६८ र दोस्रो दिन ३ अन्डर ६९ स्कोर गरेका थिए । अर्का एमेच्योर वान्चेन धोन्डुपले इभन पार २८८ स्कोरसहित नवौं स्थानमा रहेर प्रतियोगिता टुंग्याए ।
पहिलो दिन ४ अन्डर ६८, दोस्रो दिन ८ अन्डर ६४ खेलेका भुवनले अन्तिम दुई चरणमा खासै राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् । तेस्रो दिन १ अन्डर ७१ खेलेका उनी अन्तिम चरणमा १ ओभर ७३ खेलेपछि उपाधि होडमा सुवाससँग उभिन चुकेका थिए ।
सुरुका ९ होलमा इभन पार ३६ खेलेपछि उपाधि होडमा ६ स्ट्रोकले पछाडि परेका भुवनले पछिल्ला ९ होलमा पनि खेल सुधार्न सकेनन् । उनले अन्तिम ९ होलमा १ ओभर ३७ स्कोर गरे । दोस्रो होलमै बोगीमा परेका उनले चौथो, नवौं, पन्ध्रौं हालमा पनि १–१ स्ट्रोक बढी खेले । उनी पार ४ को १४ औं होलमा २ स्ट्रोक बढी खेल्दै डबल बोगीमा परे । उनले होल नं. ३, ५, ७, ११ र १८ मा बर्डी गरे पनि अन्तिमसम्म सुवासलाई चुनौती दिन सकेनन् । प्रोफेसनल गल्फ टुर अफ इन्डिया (पीजीटीआई) का प्रतियोगिता खेलेर आएका शुक्र अन्तिम चरणमा बोगीरहित खेल्दै ५ अन्डर ६७ को कार्ड बनाएर भुवनसँगै दोस्रो स्थानमा पुगेका हुन् । पहिलो दिन ७ अन्डर ६५ खेलेका उनी दोस्रो चरणमा १ ओभर ७३ को खराब प्रदर्शन गरेपछि उपाधि होडमा पछाडि परेका थिए । तेस्रो चरणमा पनि १ अन्डर ७१ को औसत प्रदर्शन गरे । समग्रमा उनी भुवनसरह १२ अन्डर २७६ को स्थितिमा रहे ।
शुक्रले अन्तिम दिन सुरुका ९ होलमा १ अन्डर ३५ खेल्ने क्रममा एक मात्र बर्डी तेस्रो होलमा गरेका थिए । उनले पछिल्ला ९ होलमा ४ अन्डर ३२ को उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने क्रममा पार ५ को ११ औं होलमा इगल गरे भने १२ र १४ औं होलमा बर्डी गरे ।
कुल ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुरस्कारको प्रतियोगितामा व्यावसायिक गल्फरतर्फ संयुक्त पहिलो स्थानमा रहेका भुवन र शुक्रले समान १ लाख ११ हजार ५ सय हात पारे । अन्तिम चरणमा इभन पार ७२ खेलेका रवि खड्का (६ अन्डर २८२) समग्रमा चौथो र व्यावसायिक गल्फरतर्फ तेस्रोमा भए । उनले ६५ हजार प्राप्त गरे ।
नीरज तामाङ ४ अन्डर ६८ खेल्दै समग्रमा ४ अन्डर २८४ स्कोरसहित शीर्ष पाँचमा रहे । उनले ५३ हजार ५ सय प्राप्त गरे । धनबहादुर थापा (३ अन्डर २८५), दिनेश प्रजापति (१ अन्डर २८७), जयराम श्रेष्ठ (इभन पार २८८) शीर्ष दसमा अटाए । अन्तिम चरणमा धनले ६९, दिनेशले ७३ र जयरामले ७२ स्ट्रोक खेले । धनले ४५ हजार, दिनेशले ४० हजार र जयरामले ३६ हजार प्राप्त गरे ।
प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७९ ०६:३२